स्त्री वा पुरुष, दिउँसो जन्म लिने व्यक्तिमा हुन्छ यी खास रहस्य, तपाई कहिले जन्मिनुभयो ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/स्त्री वा पुरुष, दिउँसो जन्म लिने व्यक्तिमा हुन्छ यी खास रहस्य, तपाई कहिले जन्मिनुभयो ?
६) यस्ता मानिस सााजिक कार्यमा भाग लिने र आफ्नो सम्बन्ध पूर्ण इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्ने हुन्छन्।७) दिउँसो जन्मिने व्यक्ति हरेक स्थितीमा सुख रहने गर्दछन्।८) यिनीहरुको स्वभावबाट सबै प्रभावित हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति सबैसँग चाडै घुलमिल हुने गर्दछन्।
९) यस्ता व्यक्ति मानसिक रुपमा बलिया हुने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा आउने हरेक राम्रा नराम्रा परिस्थितीका लागि सधै तयार हुने गर्दछन्।१०) दिउँसो जन्मिने व्यक्ति थोरै जिद्धीवाला हुने गर्दछन्। जुन कामलाई हातमा लिन्छन्, त्यो काम पुरा गर्ने गर्दछन्।
लामो समयदेखी दाइ बा´हिर,भाउजुको पेटमा ३ महिना देखी बच्चा, अनु´सन्धान गर्दा बा´हिरियो यस्तो अ´पत्यारिलो कुरा